Maxay Arintani Mar Walbo U Dhaceysaa? | Xaqiiqonews
Maxay Arintani Mar Walbo U Dhaceysaa?
Dilkii Xamdi Faarax loogu geystay Muqdisho ma aheyn mid kadis ah, horay ayey u dhacday, hadda ayey dhacday, laakiin su’aashu waxa ay tahay maxuu mar walbo u dhacayaa?
Warka: 11-ka bishan aynu ku jirno, maalinimo jicmo ah, xilli lagu jiray salaadda jimcaha gudaha Hoteelkan Waaberi ku yaala waxaa ka socday fal gurracan, Xamdi Maxamed Faarax ayaa lagu kufsaday gudaha Hoteelka ka dibna laga soo tuuray dabaqa lixaad- qaab aan wax badan laga ogeyn.
Dhamaadkiisa: Xubno ka mid ah Xamdi qoyskeed ayaa sheegay in Falka uu u dhacay qaab “Shirqool ah”, Gabadha ayaana Hoteelka u tagtay balan qaad “shaqo”, sida uu warbaahinta u sheegay Xamdi abtigeed.
Ma rabo in aan dhacadada kaga hadlo yaa loo qabtay? sidee wax u dhaceen iwm maxaa yeelay waxaan dareemi karaa in arintani ay mar walbo dhaceyso, waxaan u baahanahay in aan jawaab u helno, su’aashan “maxay arintani mar walbo u dhaceysaa?
Fiiri, dadku dareenkooda wey cabiri karaan, banaanbaxyo waa la sameyn karaa, wa caadi sidaasi waa in aan sameynaa laakiin xal uma noqonayaan dhacdooyinkan, Kufsiga iyo dilka waxa ay noqdeen “ciidda ka badan” kaliya google-ka ku qor kufsi, waxa aad arki doontaa in erayga dil uu isna soo raaci doono qoraalka, haddaba arintani maxay mar walbo u dhaceysaa?
Halkan hoose Ka Daawo Muuqaalka Qirashada mid ka ahaa dadka loo heysto dilka Xamdi
Dhacdadani hadii aan ku darno kuwa nooceeda ahaa sida kiiskii Caasho Ilyaas, dhacdadii Baydhaba, tii Afgooye iyo kuwii kale ee ka dhacay dalka oo dhan waxaad arkeysaa in su’aasha ay tahay hal nooc “maxay arintani mar walbo u dhaceysaa?
Ma ahi malag, nabi iyo qof cilmi qeybka og, hase ahaatee waxa aan fahmi karaa in dhacdadani ay halkani ku ekaan doonin, horay ayey u dhacday, hadda ayey dhacday, weyna dhici doontaa laakiin su’aasha waxa ay tahay maxay mar walbo u dhacdaa?